Ka faa'iidayso iibka Pikolinos, maalgashada raaxada | Bezzia
Iibka ayaa fursad weyn u ah iibso kabo tayo leh. Waxay dhab ahaantii yihiin a fursad aad u fiican helitaanka dhammaan walxaha ka baxsan jeebkayaga qiimaha asalka ah. Ilaa hadda sida moodada, dharka iyo kabaha ayaa sida caadiga ah ku jira meelahaas. Taasi waa sababta aan u maleyneyno inaad jeceshahay inaad ogaato iibka Pikolinos.
Pikolinos waa shirkad Isbaanish ah taas oo ay ka go'an tahay runnimada, tayada iyo raaxada. Shirkad aan hubno in ku dhawaad ​​dhammaantiin aad ogaan doontaan oo hadda bixisa ilaa 30% dhimis ururinteeda. Hoos u dhac lagu xisaabtamayo marka la eego tayada iyo adkeysiga kabahaaga.
Marka laga soo tago raaxadooda iyo cimrigooda, kuweenna ku nool waqooyiga jasiiradda waxay aqoonsan yihiin kabaha iyo kabaha canqowga inay yihiin xal weyn la dagaallama dhaxanta iyo roobka. Oo maya, maaha xayeysiis, taasi waa khibradeena. Taasi waa sababta aan u aaminsanahay inay xiiso leedahay inaan kula wadaagno qaar ka mid ah soo jeedinteeda ugu xiisaha badan.
1 Kabaha canqowga
2 Kabaha fidsan iyo kuwa isboortiga
ka kabaha kubka dhexe, Ka samaysan maqaar, waxay noqdaan xulafo wanaagsan maalinba jiilaalka. Si aad u aaddo xafiiska, si aad ugu baxdo cabitaan ... moodooyinka Vícar ee leh dhinacyada laastikada iyo Aspe oo leh hagaajinta shalash iyo jilba dhinaca. Waad jeclaan doontaa iyaga! Caleenteeda calamiga ah ee daboolan ayaa si qumman u eegaysa sawirka cagta iyo cidigeeda oo aan simbiriirixan lahayn waxay ku siinaysaa xajinta ugu habboon ee aad u baahan tahay inaad si badbaado leh ugu socotid.
Moodooyinka lagu xusay waxay leeyihiin qiimo dhimis 30% ah Sida qaabka Pompeya, kabaha canqowga ah ee cidhibta sare leh ayaa ku habboon muuqaalkaaga caadiga ah kaas oo kaa yaabin doona raaxada. Maxayse 30% uga dhigan tahay botiyadan? In qiimihiisu hoos uga dhaco €120-140 ilaa €80-97.
Kabaha fidsan iyo kuwa isboortiga
Haddii aad jeceshahay inaad mudnaanta siiso raaxadaada iyo sharad ku saabsan a kabaha nooca ciyaaraha ah maalin kasta, waxaad ka heli doontaa xulashooyin badan iibka Pikolinos si aad u cusbooneysiiso kabahaaga. Xadhkaha iftiinka iyo dabacsanaanta leh, baabuurta isboortiga ee Cantabria ama Sella waxay noqdaan beddel weyn. Labaduba waxay leeyihiin cilad dhumuc weyn leh oo ku habboon in lagu dhex socdo magaalada.
Waxaad sidoo kale sharad kartaa kabo maqaar ah oo raaxo leh maalin kasta, xarrago leh oo la taaban karo. Madow, geel ama burgundy iyo daahyo kuu oggolaanaya inaad cagahaaga ku hagaajiso wax kasta oo aad u baahan tahay, kama bixi doontid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » zapatos » Ka faa'iidayso iibka Pikolinos, maalgashada raaxada